रानीपोखरीमा रु साढे दुई करोड व्यर्थ खर्च, कसले लिने जिम्मा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ। रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा अहिलेसम्म रु दुई करोड ५० लाख सकिएको छ। विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पका कारण पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको रानीपोखरी पुनःनिर्माणका लागि रु ११ करोड ६० लाख ७३ हजार ९०० लाग्ने अनुमान भए पनि करीब रु सात करोडमा निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको कामपाका लेखा अधिकृत श्याम पाण्डेले जानकारी दिए।
स्थानीय बासिन्दा, पुरातत्व विभाग र कामपाबीच कुरा नमिल्दा हालसम्म निर्माण गरिएका सबै संरचना भत्काउने तयारी भएको छ। यस किसिमको तयारीसँगै हालसम्म करीब रु दुई करोड ५० लाख खेर गएको छ। विसं २०७३ वैशाख १० गतेदेखि वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभीले पुनःनिर्माण शुरु गरेको थियो। कामपाले भने आगामी जेठ १गतेदेखि हालसम्म प्रयोग भएको आधुनिक निर्माण सामग्री हटाई पुनःनिर्माणको काम शुरु गर्ने जनाएको छ।
जेभिका निर्देशक अर्जुन कँडेलका अनुसार सम्झौतानुसार पहिलो चरणको पर्खाल लगाउने काम सकिएको छ। उनले भने, “अन्य काम शुरु गर्न नपाउँदै विभिन्न विवादका कारण काम रोकियो।” स्थानीय बासिन्दाले भने नागरिकबाट लिइएको कर कामपाले खेर फालेको आरोप लगाएका छन्। दुई वर्ष लगाएर विसं १७२७ मा बनाइएको पोखरी प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तीन्द्रको मृत्युपछि रानीलाई शोकबाट मुक्त गराउन निर्माण गराइएको इतिहासमा उल्लेख छ। रासस
PREVIOUS POST Previous post: एमाले–माओवादीको संयुक्त कार्यक्रम नयाँ आ–आफ्नै ब्यानरमा ४ बजे हुने
NEXT POST Next post: नेप्से १४ सय अंक माथि, ५० अंकको उच्च वृद्धिपछि कारोबार अर्ब नाघ्यो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख ९, २०७५ १६:०९